यो बजेट होइन, बजेट भन्नै मिल्दैन : प्रतिस्थापन पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे (अन्तर्वार्ता) « Janata Times
२६ भाद्र २०७८, शनिबार ००:००
यो बजेट होइन, बजेट भन्नै मिल्दैन : प्रतिस्थापन पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे (अन्तर्वार्ता)
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रवार बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रमख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदको नाराबाजीबीच अर्थमन्त्री शर्माले संसद्‌मा प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको हो । अर्थमन्त्री शर्माले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्दै बजेटको आकारसमेत केही घटाउनु भएको छ । सरकारले ल्याएको बजेटलाई एमाले नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बजेट नै नभएको बताउनु हुन्छ । उहाँले मन्त्रिषरिद्‌ले निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिदिए हुने बताउनु भएको छ । प्रस्तुत छ बजेटबारे पाण्डेसँगको कुराकानी :
सरकारले अघिल्लो सरकारको बजेटका लोकप्रिय कार्यक्रम खारेज गरी प्रतिस्थापन बिद्येयक ल्याएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यसलाई बजेट भन्नु हुन्न । यो बजेट नै होइन । निधारमा लगाएको टीका र नाकको फुली परिवर्तन गरेर नयाँ मान्छे भन्ने हुन्छ र ? यसमा आएको विषय देखावटी कुरामात्रै हो । अहिले सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकको रुपमा जे ल्याएको छ, त्यसका लागि यसलाई बजेट भनेर ल्याउनु पर्दैनथ्यो । मन्त्रिषरिद्‌ले निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो । यो यो परियोजनामा यति जति परिवर्तन गरेको छु भने पनि पुग्थ्यो । यसका ठूलो विषयमा परिवर्तन छँदै छैन ।
त्यसो भए अघिल्लो सरकारको काम रोक्न मात्रै हो त ?
त्यस्तै छ । सरकारले बजेट भन्दै बिरामीलाई पाँच हजार रुपैयाँ दिने, शिक्षकहरुलाई अस्पताल बनाउँछु भनेको छ । काठमाडौंमा १० स्थानमा खाना खुवाउने विषयलाई संसद्‌मा लैजानुपर्छ र १ त्यो सरकारले गर्नसक्थ्यो । यो आधारभूत रुपमा अस्तिको बजेट हो । खासै परिवर्तन गरेको छैन । केही कुरा थप्न खोजेको छ त्यो साह्रै नगन्य छ । यो गणनामा आउने प्रकृतिको छैन । त्यसैले ठूलो प्रतिक्रिया दिनुपर्ने आवश्यकता छैन ।
३७ अर्ब ऋण घटाएको छु भनेर अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको छ । तर बजेट निर्माण गर्ने समयमा ३५ प्रतिशत जति वैदेशिक सहायता र ऋण हुन्छ । बजेटको कार्यान्वयन हुने समयमा त्यो घटेर २० प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ । गत वर्ष पनि जति हामीले अनुदान र ऋण लिन्छौं भनेका थियौं त्यो भन्दा निकै कम मात्रै लिएका छौं । अर्थमन्त्रीले धेरै राख्छन् तर कार्यान्वयन हुँदैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकै कम खर्च हुन्छ । खर्च नहुने कुरालाई अलिकति घटाएर ल्याए, त्यो के ठूलो कुरा भयो र ?
अर्थमन्त्रीले ल्याएका अव्यवहारिक कार्यक्रमहरु अहिले हट्यो भन्ने हो ?
अव्यवहारिक पनि भन्दिनँ । तर अहिले ल्याएको बजेटमा त्यसमा परिवर्तन भएको छैन । हाम्रो बजेटका तीन वटा स्रोत हुन्छन् । राजस्व, आन्तरिक ऋण र सहायता तथा बाह्य ऋण पनि छ । अहिले सहयोगको रकम घट्दै गएको र ऋणको परिणाम धेरै बढेर गएको छ । सहयोग दिन्छु भनेर जति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्छन् त्यति आउँदैन । नेपालमा व्यवहारिक कार्यान्वयन नहुन्जेल त्यसले सोधभर्ना दिँदैन । खर्च नहुँदा रकम माग्ने कुरा नै भएन् । अहिले कोभिडको कारणले बजेटरी सपोर्ट पाइरहेका छौं । अहिले धेरै सहयोग त्यसरी आइरहेको छ । त्यसमा सम्झौता भएपछि पैसा आउँछ । काम गरौं कि नगरौं, ब्याज तिरिहाल्नु पर्छ । अर्को काम भएपछि मात्रै ब्याज तिर्ने हो ।
त्यसो भए सरकारले ल्याएको बजेट प्रचारका लागि मात्रै हो ?
यसबाट कति नै प्रचार पाउनु होला र ? एकदमै थोरै कार्यक्रम मात्रै हाल्नु भएको छ । यो विषय संसद्‌मा नल्याइकनै मन्त्रिपरिषद्बाट घोषणा गरिदिएको भए हुन्थ्यो ।
अहिले बजेट ल्याउँदा बिरोध भयो, तपाईं अर्थमन्त्री रहेको बेला बजेट ल्याउँदा पनि अवरोध भएको थियो । यो दुवै घटनालाई एकै भनिरहेका छन नि ?
यी दुई घटनालाई तुलना गर्नै मिल्दैन । त्यस समयमा बजेटमै उहाँहरुले अवरोध गर्नुभएको हो । एमालेले त सभामुखको भुमिका ठीक भएन भनेर अवरोध गरेको हो, बजेटको होइन । संसद्‌मा एमालेले निरन्तर विरोध गरिरहेको छ । त्यस समयमा सबैसँग सल्लाह गरेर देशविदेशमा सूचना दिएर आज बजेट आउँछ भनेको विषय थियो । पहिलो कुरा जानकारी पनि थिएन र यो बजेट पनि होइन । सामान्य हो । अर्थमन्त्री भए पछि सबैलाई मेरो कुरा हालिदिउन भन्ने लाग्छ । त्यस समयमा बजेटलाई अवरोध गरेको हो । अहिले होइन । त्यस समयम राजनीतिक सहमति भैसकेको थियो । अहिले अरु एजेन्डामा संसद्‌ अवरोध भएको समयमा आएको हो ।